ယုဒသန်အသင်းတော် ကျမ်းစာကျောင်း ဒေါင်းမီးခွက်ကျေးရွာ ၁၉မိုင် ရန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း
Murann Ezine added 10 new photos.
February 12 at 8:47am · Pathein ·
ဒေါင်းမီးခွက်ကျေးရွာ ၁၉မိုင် ရန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း
Read more: ယုဒသန်အသင်းတော် ကျမ်းစာကျောင်း...
ယနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့ ရွှေဝါထွန်းအသင်းတော်ကို ၂၃နှစ်သား အလုပ်မရှိ ပုံမှန်အလုပ်မလုပ်ချင်တဲ့ (နေစရာ စားစရာ ပူစရာမရှိတဲ့) တူတော်မောင်ကို ခေါ် ပြီး အတူ
Read more: ဒီကနေ့ အမြင်သစ်တခုရရှိခြင်း (ဓမ္မဆရာဆိုသည်မှာ)
ဆရာဦးကျော်ညွန့် ခရစ်စမတ်စကားလက်ဆောင်။ ပုသိမ်
အသက်၇၇နှစ်ရှိပြီး သမီး မိသားစုနဲ့အတူ ပုသိမ်မြို့ ဧရာဝတီတိုင်းရွာများကို လိုက်လံ ဧဝံဂေလိပြောပါတယ်။ မနက်ပိုင်းက ထုံးဖိုတပည့်တော်စု အသင်းတော်မှာ ဆရာဦးသိန်းရွှေက မာန်၅ဖျာ အောင်သော ယေရှု ဖွားမြင်ကြောင်း ဟောပြောပါတယ်။ ဒီည ခရစ်စမတ်ည မှာလည်း ယေရှုဘုရားရဲ့
Read more: ဆရာဦးကျော်ညွန့် ခရစ်စမတ်စကားလက်ဆောင်။ ပုသိမ်
ဝိုင်ဝမ် ခရစ်ယန်အဖွဲ့နဲ့ စက်ချုပ်ဧဝံဂေလိ .. မောင်ဂျိုးဇက် (ယောသပ်)
ဂျိုးဇက် ဆိုတဲ့သားငယ် မိခင်ကမတတ်နိုင်လို့ မွေးစားဖို့ပေးလိုက်တော့ ဝိုင်ဝမ် ခရစ်ယန်အဖွဲ့က မွေးစားထားပါတယ်။ အခု ၅လ ကြာပြီ. . အားလုံးကတော့ ဘုရားပေးတဲ့ သားငယ်လေးအတွက် ပြုစုရတာ အလွန်ဝမ်းမြောက်လို့ တရားဝင် မိဘအဖြစ် မွေးစားဖို့ . .၁၅နှစ်ကြာ ခရစ်တော်အမှုဆောင် ဆပ်ကပ်နေတဲ့ ဆရာမနော်လီ ၄ယောက်အဖွဲ့ အတွက်
Read more: ဝိုင်ဝမ် ခရစ်ယန်အဖွဲ့နဲ့ စက်ချုပ်ဧဝံဂေလိ .....
နှစ်ပေါင်းများစွာ နံနက်အာရုံဦးအဖွဲ့ ဧမာနွေလအသင်းတော် (ရန်ကုန်)
သက်သေခံချက်.. ငွေကြေးတရားမ အမှုခင်း